MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardစက်တင်ဘာ 2019 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 28, 2019 အောက်တိုဘာ 23, 2019 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 26, 2019 Categories Uncategorized
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 25, 2019 အောက်တိုဘာ 9, 2019 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT က ဝန်ထမ်းများအား ဂျပန်နိုင်ငံသို့ Business Skills Training သင်တန်းတက်ရောက်ရန်စေလွှတ်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးနှင့် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သည့် MPT သည် မိတ်ဖက်ဂျပန်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော KDDI Corporation နှင့် ပူးပေါင်းကာ ဝန်ထမ်းများကို ဂျပန်နိုင်ငံသို့ Business Skills Training သင်တန်းတက်ရောက်ရန် တတိယအကြိမ်မြောက် စေလွှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်သည် MPT အတွင်း ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
MPT သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တက်ရောက်ရမည့် Business Skills Training သင်တန်းအစီအစဉ်အတွက် ဝန်ထမ်း (၈) ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ် သင်တန်းအစီစဉ်သည် ပထမ (၆) လ အဖြစ်၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊မတ်လ အထိ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ (၆) လ အဖြစ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်အထိ ဖြစ်သည်။ ပထမ (၆) လသင်တန်းအတွက် သင်တန်းသား (၄) ဦးနှင့် ဒုတိယ (၆) လ သင်တန်း အတွက် သင်တန်းသား (၄) ဦး စုစုပေါင်း သင်တန်းသား (၈) ဦးသည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပညာသင်ရမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါသင်တန်းအတွက် ဝန်ထမ်းများကို လုပ်ငန်းဌာနအသီးသီးမှ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စာတွေ့အပြင် လက်တွေ့ကွင်းဆင်း လေ့လာသင်ကြားမှုများလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပြန်လည်အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ကိုင် သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဌာနကြီး မှ ဒုတိယအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဦးမြင့်သိန်းထွန်းက “ဒီသင်တန်းအစီအစဉ်ကနေတစ်ဆင့် အသိပညာတွေ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နားလည်တတ်ကျွမ်းမှုတွေနဲ့ KDDI ဌာနပေါင်းစုံက လက်တွေ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အလွန်ကို အရေးပါတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ “လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက တစ်ဆင့် MPT ဟာ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေ မွေးထုတ်ပေးဖို့ နဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုများ လွှဲပြောင်းရယူဖို့အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ MPT -KSGM Joint Operations အနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ဒီလိုလုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းတွေ စီစဉ်ပေးခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့နဲ့ မြန်မာနှင့်ဂျပန် နှစ်နိုင်ငံကြား နည်းပညာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ နှီးနှောဖလှယ်ခြင်းကို အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ဆောင် ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း အများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်” ဟု ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ တတိယအကြိမ်မြောက် Business Skills Training သင်တန်းအစီအစဉ်၏ ပထမ (၆)လ တွင် တက်ရောက်ခွင့်ရမည့် ဝန်ထမ်းများမှာ – ဒေါ်အိအိမိုး (လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဌာန)၊ ဒေါ်သိင်္ဂီစိုး (ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုဌာန)၊ ဒေါ်သဥ္ဇာရီမွန်ရှိန် (နည်းပညာ မဟာ ဗျူဟာဌာန(IT Strategy and Platform ဌာန)) နှင့် ဒေါ်မိလွင်နန္ဒာသင်း (Network Center ဌာန) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယ (၆) လ အတွက် တက်ရောက်ခွင့်ရမည့် ဝန်ထမ်းများမှာ – ဒေါ်နွယ်ဇင်ညွန့် (Core Department) ၊ ဦးကျော်ဆန်းမော် (Mobile Access Department) ၊ ဒေါ်အိအိဟန် (Business Planning & Analysis Department) နှင့် ဒေါ်ဖြူဖြူကြည် (Sales Planning Department) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်အိအိမိုးက “အခုလိုမျိုးရနိုင်ခဲတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှာ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေသင်ကြားပေးမယ့် သင်တန်းအစီအစဉ်ကို တတ်ရောက်ဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အတွက် အရမ်းကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလည်း လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းမှာ အကောင်းမြင်ဝါဒ နှင့်အတူအကျိုးရှိစွာ ပြန်လည်အသုံးချ နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ သင်တန်းအစီအစဉ်သည် ဝန်ထမ်းများအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီအကြောင်း၊ ခေတ်သစ်လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူ အထူးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်မှု စသည်တို့ကို လေ့လာနိုင်ရန် အထူးကောင်းမွန်သော အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပူးတွဲအစီအစဉ်သည် MPT နှင့် ဂျပန် တို့ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အသီးအပွင့်များဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းတိုင်းတွင် ဝန်ထမ်းများအား အသိပညာများ ပြန်လည်မျှဝေပေးသော အလေ့အထများကိုရရှိစေရန်အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံမှထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနှင့်ဂျပန် နှစ်နိုင်ငံကြား နည်းပညာနှင့် ယဥ်ကျေးမှု နှီးနှောဖလှယ်ခြင်းကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MPT ၏ လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ချက်များကို အသေး စိတ်သိရှိလိုပါက http://mpt.com.mm/en/about-home-en/csr-activities/ သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 24, 2019 စက်တင်ဘာ 25, 2019 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 12, 2019 စက်တင်ဘာ 12, 2019 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
Night Safety Data Pack ဆိုတာဘာလဲ?
ည ၁၁နာရီမှစ၍မနက်၇နာရီအထိ Night Safety Data Pack ကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Night Safety Data Packကို *233#ကိုခေါ်ဆို၍ဝယ်ယူနိုင်သလို MPT4U Appမှာဝယ်ယူပြီအပိုဆောင်းဒေတာများကိုရယူလိုက်ပါ။
Night Safety Data Pack ကိုဝယ်ယူမယ်
Night Safety Data Packကို ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ။
Night Safety Data Packကို ညဘက်မှာ အင်တာနက် အမြန်နှုန်းကို ကိုယ်ကြိုက်သလိုသုံးစွဲနိုင်ဖို့ *233#ကို ခေါ်ဆို၍ဖြစ်စေ (သို့)
MPT4U Appမှ ဖြစ်စေ ဝယ်ယူလိုက်ကြပါစို့။
၁၉၉ကျပ် USSD 80 MB ပုံမှန်အမြန်နှုန်း ၁ရက် *233*1#
၁၉၉ကျပ် MPT4U 83 MB ပုံမှန်အမြန်နှုန်း ၁ရက် None
Night Safety Data Pack တွင်ပါဝင်သော ဒေတာပမာဏကို ည(၁၁) နာရီ (23:00:00) မှ မနက် ၇နာရီ (6:59:59)အထိ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မည်သည့်Data Pack ကို ဝယ်ယူထားသည် ဖြစ်စေ Night Safety Data Pack မှသာ အရင် ဖြတ်တောက်မည် ဖြစ်သည်။
Package ၏ သက်တမ်းမှာ ဝယ်ယူထားသော Package များပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ၁ရက်၊ ၃ရက်၊ ၇ရက် စသည်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လက်ကျန်ဒေတာများကို သယ်ဆောင်အသုံးပြုမှု မရရှိနိုင်ပါ။
ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA Prepaid and Postpaid အသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
CDMA နှင့် Base Tariff အသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသောသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
အင်တာနက် မြန်နှုန်းကို ထိန်းညှိ အသုံးပြုနိုင်သော Night Safety Data Pack ကို ဝယ်ယူထားပါက ည (၁၁) နာရီမှ မနက် (၇)နာရီအထိ မည်သည့်ဒေတာ အသုံးပြုမှုကိုမဆို အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို တစ်စက္ကန့်လျှင် 1.5MB ထိန်းညှိအသုံးပြုနိုင်ပါမည်။ ရယူထားသော ဒေတာပမာဏ ကုန်ဆုံးသွားသည် အထိ (သို့) အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ထိန်းညှိ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိသော Night Safety Data Pack ကို ဝယ်ယူလိုက်သည့်အချိန်အထိ တစ်စက္ကန့်လျှင် 1.5 MB ထိ ထိန်းညှိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။.
ဥပမာ – အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ထိန်းညှိပြီး အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိသော Night Safety Data Pack ကို ဝယ်ယူထားပြီးနောက် အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ထိန်းညှိပြီး အသုံးပြုနိုင်သော Night Safety Data Pack ကို ထပ်မံဝယ်ယူပါက သုံးစွဲနိုင်သော ပမာဏ သည် ပေါင်းစည်းသွားပြီး သက်တမ်းမှာ နောက်ဆုံး ဝယ်ယူထားသည့် အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ထိန်းညှိပြီး အသုံးပြုနိုင်သော Night Safety Data Pack ၏ သက်တမ်းအတိုင်း ကုန်ဆုံးပါမည်။
အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို တစ်စက္ကန့်လျှင် 1.5MB ထိန်းညှိပြီး အသုံးပြုနိုင်သော Night Safety Data Pack ကို ဝယ်ယူထားပြီး သက်တမ်းမကုန်ခင် ဒေတာပမာဏ အားလုံး အသုံးပြုပါက အခြား ဝယ်ယူထားသော Data Pack များမှ ဖြစ်စေ၊ Main Balance မှဖြစ်စေ ဖြတ်တောက်ပါမည်။ သို့သော် အင်တာနက်မြန်နှုန်း ထိန်းညှိ၍ အသုံးပြုမှု မရရှိနိုင်ပါ။ အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို တစ်စက္ကန့်လျှင် 1.5 MB ထိန်းညှိနိုင်သော Night Safety Data Pack ကို ထပ်မံ ဝယ်ယူ၍ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဒေတာလက်ကျန်နှင့် သက်တမ်းများ ပေါင်းစည်းသွားမည် ဖြစ်သည်။
Prepaid မှ Postpaid သို့ ဖြစ်စေ၊ Postpaid မှ Prepaid သို့ဖြစ်စေ ပြောင်းလဲမည်ဆိုပါက လက်ရှိ ဝယ်ယူထားသော Night Safety Data Pack များကို ဆက်လက်၍ အသုံးပြုနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလ (၂၂)ရက်မှ ထပ်မံမကြေညာမီအထိ ဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 12, 2019 ဇန်နဝါရီ 22, 2022 Categories Data ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ
About MPT’s Vaule Added Services & Information of Subscibe/Unsubscribe
၁ Let’s Play Let’s PlayWeb Browser ကိုအခြေခံထားသော HTML5ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၂၀၀ ကျပ် ON to 8765 GAME STOP to 8765
၂ Quest to Million Web Browser ကိုအခြေခံထားသော အမေးအဖြေဂိမ်းဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ် ON to 8576 OFF to 8576
၃ App Box Application ကိုအခြေခံထားသော ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၂၅၀ ကျပ် ON to 8980 APP STOP to 8980
၄ Vuclip Web Browser ကိုအခြေခံထားသော ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ် ON to 8383 OFF to 8383
၅ Myanmar Sports Web Browser ကိုအခြေခံထားသော အားကစားဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၁၅၀ ကျပ် ON to 8633 OFF to 8633
၆ m-Learning Web Browser ကိုအခြေခံထားသော အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၁၅၈ ကျပ် ON to 8282 OFF to 8282
၇ Smart Kids Web Browser ကိုအခြေခံထားသော ကလေးများအတွက် ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၁၅၀ ကျပ် ON to 8733 OFF to 8733
၈ Combox Web Browser ကိုအခြေခံထားသော သီချင်း၊ ဂိမ်း အစရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ် ON to 8981 OFF to 8981
၉ Apptouch Application ကိုအခြေခံထားသော ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ် ON to 8550 OFF to 8550
၁၀ Guess it Web Browser နှင့် Application ကိုအခြေခံထားသော အမေးအဖြေဂိမ်းဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၁၅၀ ကျပ် ON to 8533 OFF to 8533
၁၁ Ballone Star Application ကိုအခြေခံထားသော ဘောလုံးစတားဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၁၀၅ ကျပ် ON to 8118 DD OFF to 8118
၁၂ Nay La Application ကိုအခြေခံထားသော ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၁၅၈ ကျပ် ON to 8998 DD OFF to 8998
၁၃ Thuta Myay Web Browser နှင့် Application ကိုအခြေခံထားသော စိုက်ပျိုးရေးဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၁၀၅ ကျပ် TTM to 8834 STOPTTM to 8834
၁၄ Gameloft Application ကိုအခြေခံထားသော ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၂၀၀ ကျပ် ON to 8793 STOP GAME to 8793
၁၅ Big9 Web Browser နှင့် Application ကိုအခြေခံထားသော ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ် ON to 8989 OFF to 8989
၁၆ Health Tips & Quiz Web Browser ကိုအခြေခံထားသော ကျန်းမာရေးဂိမ်းဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၁၄၉ ကျပ် ON to 8123 OFF to 8123
၁၇ MyMTV Web Browser ကိုအခြေခံထားသော သီချင်းဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ် MTV to 8411 UNMTV to 8411
၁၈ Digital Information SMS ကိုအခြေခံထားသော ဒီဂျစ်တယ်သတင်းများဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၅၃ ကျပ် DG to 8212 DG OFF to 8212
19 Shwe Stream Web Browser ကိုအခြေခံထားသော ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ် ON to 8202 OFF to 8202
၂၀ Mahar Application ကိုအခြေခံထားသော ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှု တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ် via application MAHAROFF to 8686
၂၁ MPT Ring Tune ခေါ်သူနားဆင်တေးသံစဉ် တစ်လလျှင် ၁၀၅၀ ကျပ်
တစ်ရက်လျှင် ၄၇ ကျပ် REGD (or) REGM to 7979 UNR to 7979
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 10, 2019 စက်တင်ဘာ 25, 2020 Categories Vas Services MM
MPT က “ရှေ့သို့လှမ်းချီ ဒီဂျစ်တယ် ပညာရေးဆီ” အစီအစဉ်ဖြင့် အဆင့်မြင့် အိုင်တီနည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းသစ် ဖွင့်လှစ်
MPT နှင့် NLD ပညာရေး ကွန်ရက်တို့ပူးပေါင်းပြီး အနာဂတ်၏ ဒီဂျစ်တယ်ပညာရပ် ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းဆရာများ မွေးထုတ်ပေးမည့် အထူးသင်တန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ထောက်ပံ့နေ
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးနှင့် ဦးဆောင် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သည့် MPT အနေဖြင့် အထူးအောင်မြင်ခဲ့သည့် “ရှေ့သို့လှမ်းချီ ဒီဂျစ်တယ်ပညာရေးဆီ” အစီအစဉ်၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် ကွန်ပျူတာပညာ ကျွမ်းကျင်မှု ဆရာဖြစ် သင်တန်းသစ်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီဖြစ်ကြောင်း ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်။
နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် ဤသင်တန်း အစီအစဉ်ကို MPT နှင့် NLD ပညာရေး ကွန်ရက် တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကွန်ပျူတာပညာ ကျွမ်းကျင်မှု ဆရာဖြစ်သင်တန်းသည် “ရှေ့သို့လှမ်းချီ ဒီဂျစ်တယ်ပညာရေးဆီ” အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် အောင်မြင်ခဲ့သည့် သင်တန်းသားများကို မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ကွန်ပျူတာ အက်ပလီကေးရှင်း နှင့် အိုင်တီနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု သင်ကြားရေးနည်းလမ်းများကို သေချာစွာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာပညာ ကျွမ်းကျင်မှု ဆရာဖြစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်မည့် သင်တန်းသား (၅၀) အနေဖြင့် သင်တန်းပြီးဆုံးပြီးနောက် မိမိတို့ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်လာသည့် အဆင့်မြင့် ကွန်ပျူတာပညာများကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ NLD ပညာရေး ကွန်ရက် သင်တန်းကျောင်းများမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသများ၌ ပြန်လည်မျှဝေ သင်ကြားပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွက် ကွန်ပျူတာပညာ ကျွမ်းကျင်မှု ဆရာဖြစ်သင်တန်း ပထမအသုတ်ကို သင်တန်းသား (၂၅) ဦးဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ MPT သင်တန်းကျောင်း၌ စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
“MPT အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အခွင့်အရေးနည်းပါးလှတဲ့ လူငယ်တွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကွန်ပျူတာပညာ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ မျှဝေသင်ကြားမှုကနေတစ်ဆင့် တစိုက်မတ်မတ်နဲ့ ကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာတွေက ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကို တိုးတက်စေနိုင်သလို စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင်မြင်မှုအတွက် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သူတွေ လုံလုံလောက် လောက် ရှိနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းလ် အင်တာနက်နဲ့ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ နိုင်ငံရဲ့ ခေတ်မီ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးစနစ်ကို တည်ဆောက်ရာ မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး ပါဝင်ခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။” ဟု MPT-KSGM Joint Operations ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ဌာနကြီးမှ ဒုတိယအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဦးမြင့်သိန်းထွန်း က ပြောကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကလည်း “ရရှိနိုင်တဲ့ သတင်းနည်းပညာရင်းမြစ်တွေအားလုံးကို ဘယ်လိုအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်တန်းဆရာတွေကို လေ့ကျင့်ပေးနိုင်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ဒီဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှု ပညာရပ်တွေကိုဖြန့်ဝေရေးအတွက် အထူးပဲအရေးပါလှတဲ့အပြင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုလည်း အကျိုးအမြတ်တွေ ဖြစ်ထွန်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အနေအထားအရ နိုင်ငံတစ်ဝန်းက အသေးစားနဲ့ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာတွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို အပြည့်အဝ ရရှိခံစားစေနိုင်မယ့် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှုနဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အတွေ့အကြုံတွေမရှိသေး တာကြောင့် MPT ကနေ အခုလိုမျိုး ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းတွေ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေတာကို ကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။” ဟု ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
“ရှေ့သို့လှမ်းချီ ဒီဂျစ်တယ်ပညာရေးဆီ” အစီအစဉ်ကို MPT နှင့် NLD ပညာရေး ကွန်ရက်တို့ ပူးပေါင်း၍ မြို့ပြများတွင်သာမက မြို့ပြမဟုတ်သည့် ဒေသများတွင် နေထိုင်သော လူငယ်များအား ပညာရေးနှင့် နည်းပညာပိုင်းတို့ကို လက်လှမ်းမီစေရန်အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအစီအစဉ် စတင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားပေါင်း (၅,၀၀၀) ကျော်သည် MPT ၏ ယခုအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုပညာရပ်များ တတ်မြောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
MPT အနေဖြင့် ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာ တတ်ကျွမ်းမှု ကွာဟချက်လျော့ချရေးကို နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် တစိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းရှိ MPT Telecenter ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်၌ လူအများအတွက် အသုံးဝင်ပြီး အကျိုးရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း မျှဝေပေးအပ်လျက်ရှိသည်။ MPT အနေဖြင့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း ဒေသကြီး အသီးသီးရှိ အမေ့အိမ် ပညာဒါန သင်တန်းကျောင်းများတွင် အင်တာနက် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု နှင့်အတူ လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာ အလုံး ၃၀၀ ကိုအသုံးပြုပြီးသင်တန်းများကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ MPT သည် နိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ မိုဘိုင်းလ်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပြီး အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအား မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုတတ်စေရန် အသိပညာပေးမှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
MPT သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးနှင့် ဦးဆောင် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်ပြီး၊ နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ ကျော်ကြာအောင် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ရှေ့ဆောင်လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ ကြိုးဖုန်းနှင့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများအား ပြည်သူများနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများထံ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ လွှမ်းခြုံထားသည့် အကြီးမားဆုံး 3G ကွန်ရက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထာကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြန်ဆုံးနှင့် အဆင့်အမြင့်ဆုံး MIMO 4X4 နည်းပညာ အသုံးပြုထားသောLTE+ ကွန်ရက်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင် ထားပါသည်။
၂၀၁၄ ဇူလိုင်လတွင် MPT သည် KDDI Summit Global Myanmar (KSGM) နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်အား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ KSGM သည် ဂျပန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ ဖြစ်ကြသည့် KDDI Corporation (KDDI) နှင့် Sumitomo Corporation (Sumitomo) တို့မှ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် MPT အနေဖြင့် KDDI နှင့် Sumitomo တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဆယ်နှစ်အတွင်း ဒေါ်လာ ၂ ဘီလျံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ကြ ပါသည်။ အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
MPT အနေဖြင့် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၈ ထောင်ကျော်နှင့်အတူ KSGM နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား စဉ်ဆက်မပြတ် အားစိုက်ဆောင်ရွက်နေကာ တာဝန်သိမှုလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်း (Corporate Social responsibility) ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးများအား လေးစားလိုက်နာလျက် မြန်မာနိုင်ငံအား ရှေ့သို့လှမ်းနိုင်စေ ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ MPT အနေဖြင့် လက်ရှိတွင် သုံးစွဲသူ ၂၃ သန်းကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
အခြားသောအချက်အလက်များနှင့် ပိုမိုတိကျသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက် www.mpt.com.mm သို့မဟုတ် www.facebook.com/mptofficialpage များတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ MPT ၏ လှုပ်ရှားမှုများအား ပိုမိုသိရှိလိုပါက http://mptcsr.foc.lotayamm.com/mptyouth သို့ သွားရောက်ပြီး သတင်းအချက်အလက်များ စုံလင်စွာပါရှိသည့် ကော်ပိုရိတ် ဗီဒီယိုအား အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
(+95)9423000171 / (+95)98630050
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 9, 2019 ဒီဇင်ဘာ 11, 2019 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm